Isitolo esidayisa yonke impahla i-t-shirt yesitolo esidayisa yonke impahla eshibhile yomkhiqizi kanye nefektri I-Lijinghui
Isitolo esidayisa yonke impahla ngokwezifiso 3d isikipha amadoda Sublimation ukuphrinta ukuphrinta okugcwele isikipha
Inombolo imodeli: JC001
Indwangu Isisindo: 160 amagremu
Izindlela Zokuphrinta: Ukuphrinta kwe-Sublimation
Izinto: 100% Polyester
Amagama angukhiye: i-sublimation t shirt
Into: Izikibha ze-OEM
Igama lomkhiqizo Isitolo esidayisa yonke impahla ngokwezifiso 3d isikipha amadoda Sublimation ukuphrinta ukuphrinta okugcwele isikipha
Indwangu I-polyester engu-100%. 160gsm
Isitayela isikibha sabesilisa
SIZE CHART (Qaphela: Zonke izilinganiso zingamasentimitha)
Intuthuko yethu incike egiyeni eliphakeme, amathalenta amahle kakhulu kanye namandla aqiniswa ngokungaguquguquki ama-Quots for China High Quality T-Shirts Ukuphrinta Ngokwezifiso 100% Izikibha Zikakotini, Uma unemfuneko cishe yanoma yimuphi umkhiqizo wethu kanye nezixazululo, khumbula ukusibiza manje. Sifuna ukuzwa kuwe maduzane.
Ama-Quots we-China T Shirts Custom Printing ngentengo engu-100% Ukotini, Inkampani yethu ihlinzeka ngekhwalithi enhle nentengo efanelekile kumakhasimende ethu. Emizamweni yethu, sesivele sinezitolo eziningi eGuangzhou futhi imikhiqizo yethu nezixazululo zithole udumo kumakhasimende emhlabeni jikelele. Umsebenzi wethu ubulokhu ulula: Ukujabulisa amakhasimende ethu ngokuthengiswa kwezinwele ezisezingeni eliphakeme futhi silethe ngesikhathi. Uyemukelwa amakhasimende amasha namadala ukuxhumana nathi ngobudlelwano bebhizinisi besikhathi esizayo.
Ibhizinisi lethu ligcizelela ukuphathwa, ukwethulwa kwabasebenzi abanamakhono, kanye nokwakhiwa kokwakhiwa kwamathimba, ukuzama kanzima ukuqhubeka nokwenza ngcono izinga elijwayelekile kanye nokuzibophezela kwamakhasimende abasebenzi. Ibhizinisi lethu lifinyelele ngempumelelo iSitifiketi se-IS9001 kanye ne-European CE Certification yoMkhiqizi waseChina Ngokwezifiso Sublimation Clothes Sport Tshirt Clothing Cotton T-Shirt Wholesale Silkscreen Men T Shirt, Sijabule ngokuthi besilokhu sikhuphuka ngokuqhubekayo sisebenzisa amandla anamandla futhi ahlala isikhathi eside okusiza kwethu abathengi abajabulayo!
Umkhiqizi wentengo ye-China T-Shirt ne-Polo Shirt, Inkampani yethu ihlale igxila ekuthuthukiseni imakethe yamazwe omhlaba. Sinamakhasimende amaningi eRussia, emazweni aseYurophu, e-USA, emazweni aseMpumalanga Ephakathi nasemazweni ase-Afrika. Sihlala silandela leyo mfanelo eyisisekelo ngenkathi insizakalo iyisiqinisekiso sokuhlangabezana nawo wonke amakhasimende.
Langaphambilini I-sublimation eyenziwe ngokwezifiso engu-100% ye-polyester eyomile eyanele imikhono emifushane yehembe labesilisa
Olandelayo: Oem Okugcwele Phrinta Sublimation T Shirts Ngokwezifiso 100% Polyester T-Shirt
Factory ethengisa ngqo umbala okuqinile ukhololo ongaphakeme amadoda & ...
I-Custom Logo Pattern Plain Man Igqoka iDemo Sleev ...
Imfashini ihembe lamadoda ngokwezifiso lakha ...
Isitolo esidayisa yonke impahla ngokwezifiso logo ezemidlalo imisipha ithangi eziqongweni g ...
Custom ukuphrinta design entsha unisex Sublimation p ...